Ruwanda oo Xukuumadda Fransiiska ku eedeysay xasuuqii 1994kii – Kasmo Newspaper
Ruwanda oo Xukuumadda Fransiiska ku eedeysay xasuuqii 1994kii
Updated - December 15, 2017 2:18 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Ruwanda ayaa Saraakiil Faransiis ah u haysta dacwado kulul kuna saabsan in ay lug ku lahaayeen xasuuqii dhacay sannadkii 1994kii, sidaasna ku sii murginaya xiriirkii aan awalba fiicnayn ee 2da dal.
Arbacadii, 13kii Disember 2017, Xukuumadda Ruwanda waxay shaacisay Warbixin lagu diyaariyay xafiiska Garsoorka “Cunningham Levy Muse LLP” ee Washington, taas oo caddeynaysa qaar ka mid ah wararka ku lug lahaanshaha faransiiska ee xasuuqii Ruwanda.
Warbixintu waxay caddeynaysaa in laga bilaabo 1990kii ilaa March 1994kii Xukuumaddii faransiiska ee Madaxweyne Francois Mitterand la socotay, ka qaybgalkii Xukuumaddii Ruwanda ee Madaxweynihi xilligaas, Habyarimana, xasuuqii Tutsi-ga laga tirada badanyahay.
Isla markaasna u oggolaatay ciidammadeeda Mulitarigu in ay tabar siiyaan qabiilkii ka soo horjeeday Tutsi-ga, in kast aoo wali cunaqabatayntu saarnayd.
Sidoo kale, waxaa Xukuumadda faransiiska lagu eedeynayaa in ay, xasuuqa ka dib, horjoogsatay caddaaladdii, iyada oo ka baaqsatay in ay soo gudbiso dokumentiyo muhiim ahaa.
Iyo waliba in ay ka gaabisay dabagalkii amase soo dhiibistii dadkii lagu tuhunsanaa in ay ahaayeen dambiilayaal dagaal, kuwaas oo maantadaan wali ku nool gudaha Faransa.
Warbixinta waxaa maalintii Talaadada u gudbiyay Xukuumadda Faransiiska, Safiirka Ruwanda u fadhiya Paris, kaas oo si xoog leh uga codsaday Faransa in ay bixiso dokumentiyo sir ah lana xiriira xilliyadaas.
Kaydka dokumentiga (Archief) ee loo adeegsaday diyaarinta warbixintaan waxaa ku jira ilowareedyo caam ah oo muujinaya gacansaar ka dhexeeyay Xukuumadda faransiiska iyo Rejiimkii Ruwanda ee xasuuqay bishii April 1994, dad gaaraya 800,000 qofood oo qabiilka Tutsi u badnaa.
Xiriirka 2da dal wuxuu sii xumaanayay ilaa sannadkii 2006, markii Garsoore Faransiis ah furay baaritaanka shilkii diyaaradeed ee 6dii April 1994 uu ku geeroyooday Madaxweynihii Ruwanda ee xilligaas, Juvenal Habyarimana.
Dhacdadaas oo loo arkayay in sababtii bilowday xasuuqa dagaalkii sokeeye, iyada oo Tutsi-ga loo haystay in ay mas’uul ka ahaayeen shilkaas.
Baaritaankaas waxaa Ruwanda uga jawaabtay iyada oo, bishii Agosto 2008dii, si gaarkeeda ah u bilowday in ay baarto kaalintii Fransa ku lahayd xasuuqa, taas oo keentay in uu xiriirkii Dibolomasi ee 2da dal xirmo ilaa 2009kii.
Ilaa maantadaan la joogo, xiriirka 2da dal ma ahan mid sidaas u wanaagsan, iyada oo Faransiisku Safaarad ku lahayn Kigali, Ruwandana Safiirkeedii dhowaan ka soo qaadatay Paris.